Itholakala enhliziyweni yeThe Catlins, iBeresford Heights inikezela ngendawo yokuhlala ye-boutique ezungezwe ukubukwa okudonsa umoya. Ibekwe phezu kwe-Table Hill, le ndawo esanda kwakhiwa iyindawo yothando, ngaphandle kwegridi, ebalekela izithandani ezifisa ukubaleka okunethezekile, okunokuthula kwasemaphandleni.
Ubude bendawo yokulala kunesitezi, esihlanganisa ubhavu oshisayo oshisayo kanye nokubukwa kwe-panoramic. Ngaphakathi kuyindawo yokuhlala enethezekile yokuphumula, ukufunda, noma ukubuka. Futhi kanye nekhishi eligcwele elihlanganisa zonke izinto eziyisisekelo, kukhona ne-barbecue yangaphandle. Kuhlinzekwa ukudla kwasekuseni kwase-Continental, futhi ngesidlo sakusihlwa izivakashi zingaziphekela noma zi-ode “i-Beresford Bundle” egcwele izibiliboco zasendaweni ezizophekwa, ephelezelwa amasaladi enziwe ekhaya - alethwe emnyango. Ukudla okuphekwe ngokugcwele nakho kungahlelwa ngaphambi kokufika.
I-Beresford Heights yasungulwa ngu-Warren kanye no-Stephanie Burgess, isizukulwane sesithathu somndeni wakwa-Burgess ukuhlala futhi balime le ndawo engamahektha ayi-1200 egxile kakhulu ezinkomeni ze-Stud Simmental: Beresford Simmentals.
Umqondo wokudala le Haven eyingqayizivele nokwabelana ngendawo enokuthula umndeni wakwaBurgess onenhlanhla yokuhlala kuwo ube iphrojekthi yomndeni ehlangene.
Izivakashi ezifisa ukubona kancane ukulima kwe-kiwi kwendabuko zingase zivakashele epulazini noma zibukele imibukiso yezinja ezisebenzayo. Ukuze uthole izivakashi ezifunayo nezifuna i-adrenaline, uhambo lokuzingela oluqondisiwe lwenyamazane engafusi nebomvu luyatholakala. Abanye bayakujabulela ukutotoswa isazi sokubhucunga umzimba endaweni endaweni yangasese, bese bevuselela kubhavu oshisayo ngokubuka kwakho okumangalisayo kwe-The Catlins kanye neCannibal Bay. Kwabanye, ithuba lokuhwebelana ngempilo yabo ematasa futhi baphumule kule ndawo yokucasha ngemilingo yikona okugqamile kokuhlala kwabo eBeresford Heights.
Ukufika lapho kumnandi. Ngemva kokushayela e-The Catlins, izihambeli zibingelelwa ababungazi uStephanie noWarren Burgess. Bazosiza ekudluliseleni okungokwakhe ku-All Terrain Vehicle (ATV), ngaphambi kokuthi bathathe imizuzu engu-15, uhambo olungekho emgwaqeni banqamule ipulazi labo elisebenzayo baye esiqongweni se-Table Hill, lapho indawo yokulala ilindele izivakashi ukuba ziphumule futhi ziphumule.
5.0 ·123 okushiwo abanye
5.0 · 123 okushiwo abanye
I-Beresford Heights inikeza izivakashi ithuba lokuphunyuka endleleni yazo yokuphila ematasatasa endaweni ecashile eyimfihlo futhi enomlingo, ehambisana nehlathi lendawo elizungezile elinikeza izivakashi ikhono lokubamba iqhaza ekuhambeni okuningi okubukekayo, okufana ne-Matai Falls Rail Trail noma ukuthatha uhambo olufushane oluya ezimpophomeni eziseduze. namabhishi ukuhlola izindawo ezibalulekile ze-The Catlins.
Sizobe siku-24/7 ngesikhathi sakho e-Beresford Heights